musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » chengetedzo » Nguva Itsva muLatin American Tourism Security
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Colombia Breaking News • mhosva • Hurumende Nhau • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • USA Kuputsa Nhau • Wtn
World Tourism Network Mutungamiri Dr. Peter Tarlow anga ari mutauri akakosha kumusangano uchangobva kuitika weColombia weNational Tourism Police Security and Safety Conference muColombia.
Musi waGumiguru 14-15, iyo Colombian National Tourism Police yakaunza nguva nyowani yekuchengetedzwa kwekushanya neyemunhu uye chaiye "Congreso de Seguridad Turística ”(Tourism Security uye Chengeto Musangano).
Vanenge mazana maviri vanhu vakapinda musangano uyu mumunhu pamwe nevanhu vangangoita zviuru zviviri kubva kuLatin America.
Musangano uyu waive nevatauri kubva kuColombia nedzimwe nyika dzeLatin America pamwe naDr Peter Tarlow, vaimiririra United States.
Colombia yakagara iri mutungamiri mumapurisa ekushanya. Pasi pehungwaru hwehungwaru hwaCoronel Jhon (kwete kuperetera zvisirizvo) Harvey Alzate Duque, Colombia yakave mutungamiri weLatin America mumunda wekuchengetedzwa kwekushanya. Uku kukoshesa kuchengetedzwa kwekushanyirwa uye kuchengetedzeka kwachinja chimiro chakaipa chekare, uye nhasi Colombia mutungamiri muLatin America kushanya.
Chiitiko ichi chakavhurwa naGeneral Jorge Luis Vargas, anotungamira mapurisa eColombia. Vatauri vepasirese havana kuuya chete kubva mhiri kweLatin America asiwo kubva kuFrance neSpain. Nyaya dzevatauri dzakatangira pakuchengetedzwa kwekushanyirwa uye kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwekushanya kwakave kwakakosha mune ino post-Covid-19 zera renjodzi kune nyaya dzekuchengetedza cyber uye biosecurity. Paakabvunzwa nezve kukosha kwekuchengetedzwa kwekushanya, Tarlow akataura kuti "makore gumi apfuura, Colombia yaive nzvimbo yakasiyana" Tarlow akaenderera mberi nekutaura kuti kunyangwe mumakumi emakore apfuura vashanyi kuColombia vaitya kuenda kunze kunyanya kwasviba, mamiriro ezvinhu haasisina nyaya yacho. Tarlow akataura kuti nhasi nekuda kwezviuru zvemazana akazvipira uye akadzidziswa mapurisa ekushanya, vashanyi vanokwanisa kunakidzwa neColombia vachiziva kuti njodzi chete yavanosangana nayo ndeyekuti vangangoda kuenda.
Vatauri vemusangano vakabvumirana pamwe chete vakarumbidza musangano uyu uye vakaona kukosha kwekuita musangano wechiSpanish muLatin America yese. Semuenzaniso, Juan Fabián Olmos, uyo asati aenda pamudyandigere achitungamira mapurisa eCordoba kuArgentina, akakorokotedza mapurisa eColombia nebasa rakashamisa ravakaita mukugadzira nharaunda yakachengeteka uye inochengeteka yevashanyi vanobva pasirese. Brigadier General Minoru Matsunaga vekuDominican Republic vakataura pamusoro pekuti Politur (akabatanidza mapurisa nemauto ezvekushanyirwa nekuchengetedzwa kwemauto) akazove chiratidzo chechengetedzo yekushanya mudunhu rese.
Juan Pablo Cubides uyo anotungamira zvirongwa zvekuchengetedza zvekushanya muColombia yese akaona kuti Colombia inyika inoona kuchengetedzeka kwekushanya sechikamu chekugamuchira kwavo vaeni. Cubides akacherekedza kuti mapurisa haangori vamiriri vemutemo, asi vamiririri venyika yavo, uye semapurisa ekushanya akadaro chikamu chakakosha chekusimudzira hupfumi hwenyika. Vamwe vatauri vakakurumbira vaisanganisira Manuel Flores anobva kuMexico. Flores ndiye wekutanga Latin America kupihwa mukurumbira World Tourism Network Gamba reKushanya mubairo, naOscar Blacido Caballero, wekuPeru wekumaodzanyemba kuraira iyo inosanganisira yakakosha guta rekushanya reCuzco uye inozivikanwa pasi rese Machu Pichu. Musangano uyu hauna kungotarisa nyaya dzemuno chete asiwo matambudziko epasirese akadai sekuchengetedzwa kwecyber. Dr. Juan Antonio Gómez, vekuSpain vakapa ruzivo rutsva kutyisidziro yepasirese yekurwiswa kwecyber zvakare indasitiri yekushanya yepasirese.
Musangano uyu wakapera musi waGumiguru 15th pamwe nekuimbwa kwedzimbo dzeColombia nedzemapurisa uye kutsunga kushandisa zvidzidzo zvakadzidzwa kuCentral nekuSouth America.
Mamwe mashoko pamusoro World Tourism Network tinya apa.